सानो लिङ्ग भएको मानिससँग सम्पर्क गर्दा सन्तुष्टि हुन्छ कि हुँदैन ? - Hamro eSansar
January 3, 2018 January 5, 2018 admin1 Comment on सानो लिङ्ग भएको मानिससँग सम्पर्क गर्दा सन्तुष्टि हुन्छ कि हुँदैन ?
सानो लिङ्ग भएको मानिससँग सम्पर्क गर्दा सन्तुष्टि हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो बेला
Tagged यौन मनोविज्ञान
1 thought on “सानो लिङ्ग भएको मानिससँग सम्पर्क गर्दा सन्तुष्टि हुन्छ कि हुँदैन ?”
Pingback: नियमित सेक्स गर्ने महिलामा यस्ता परिवर्तन देखिन्छन् - Hamro eSansar